किन Google लाई Neogegraphers धन्यवाद - Geofumadas
किन न्युजग्राफर्सहरू गुगल जस्तै धन्यवाद
जुन, 2009 ArcGIS-ESRI, जियोस्पाटियल - जीआईएस, GvSIG, Microstation-बेन्टले
यो साक्षात्कारको नाम हो जुन एरिक वान रिजले भौगोलिक सूचना प्रविधिमा तीन उत्कृष्ट कम्पनीहरूको महत्त्वपूर्ण पुरुषसँग सञ्चालन गरे:
जैक डांगर्मोन्ड, राष्ट्रपति को ESRI
रिचर्ड Zambuni, geospatial लाइन को निदेशक बेन्टले
Ton de Vries, Executive of बेन्टले कडीस्ट्रे र ल्यान्ड विकासको लाइनमा
Halsey बुद्धि, राष्ट्रपति र सीईओ Intergraph
कागजात रोचक छ, र यो त्यस्तो समय आयो जब डेस्कटप टेक्नोलोजी (डेस्क जीआईएस) को विकास वेब (वेब ​​जीआईएस) को लागि एकदम विकसित भएको छ र यसको क्याडसँगको एकीकरण धेरै प्रगति भएको छ। विनिमय र वेब एकीकरणको मापदण्डको विकास र समेकनको बाहेक।
अन्तर्वार्ता प्रश्नहरूको शृ based्खलामा आधारित छ, जसमा प्रत्येक सहभागीले बजार प्रवृतिको बिरूद्ध आफ्नो कम्पनीको दृष्टिकोण खडा गर्दछ। यी प्रश्नहरू हुन्, शाब्दिक अनुवाद गरिएको छैन:
भविष्यमा GIS विशेषज्ञहरूको भूमिका के हो? के तिनीहरूसँग धेरै कम्प्युटर कौशलहरू छन् वा तिनीहरू जीआईएसमा विशेषज्ञहरू विचार गर्न जारी हुनेछन्? या शायद हामी विशेषज्ञहरु को आवश्यकता हो जो geoinformation मा लागू प्रौद्योगिकी, अर्थशास्त्र, सामाजिक र कानूनी विज्ञान को बहुमुखी मास्टर छ?
के तपाईं डेस्कटप-आधारित GIS उपकरणहरू जारी राख्नुहुन्छ वा सर्भर-आधारित द्वारा प्रतिस्थापित हुनेछ?
के तपाईंको कम्पनीले वैश्विक संकटको जिम्मेवारी छ? यसमा GIS आवेदन गर्ने अवसरहरू समावेश गर्दछ? र कसरी?
युरोपमा GIS उद्योग यस समयमा INSPIRE, GMEIS, SEIS र GALILEO मा आधारित छ। संयुक्त राज्यमा यसले उनीहरूलाई चासो दिदैन, मेरो सोचाइ छ कि यहाँ उद्योग गुगल, माईक्रोसफ्ट र याहू के गर्छन् र उनीहरूसँग कसरी एकीकृत गर्ने भन्नेमा बढी आधारित छ। यस बारे तपाईको राय के हो?
जीआईएसको साथ सीएडीको एकीकरण क्षमता हो जुन हरेक दिन झन् झन् महत्त्वपूर्ण हुँदै गइरहेको छ। तपाईंको कम्पनीले अहिले यस GIS-CAD एकीकरण प्राप्त गर्न हालको समाधान के हो? तपाईं भविष्यलाई कसरी हेर्नुहुन्छ: के हामी यी दुई विशेषताहरू देख्नेछौं वा तपाईंलाई लाग्छ कि समय आउँछ दुवैको पूर्ण एकीकरणको लागि?
यदि तपाईं यसलाई हेर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंसँग छ जून संस्करणलाई सल्लाह दिनुहोस् जियोओनोफर्मिक्सिक्स पत्रिका को, जो अलग रुचि को लेख यस्तो छ जस्तै:
सोनार को लागी डेटा को लागी
अस्ट्रेलियामा भूमि उपयोगको नक्सा
नि: शुल्क GIS सफ्टवेयरको साथ विश्व म्यापि।। यो रेखाबाट निरन्तरता हो जुन उनीहरूले ल्याए तीन अघिल्लो संस्करणहरू खुला स्रोत GIS उपकरणहरूको बारेमा। लेख रमाईलो छ, यस नामको साथ ग्यारी ई। शर्मनको पुस्तकमा आधारित, ग्राफ र स्थिति दिनुहोस् जुन उनीहरूले gvSIG लाई प्रयोगकर्ता विशेष स्तरमा दिन्छन्।
ओटोडिस्क, ओभरपोल्युसनबाट शहरहरू बचत गर्दछ
Cicade र DIMAC प्रणालीहरू।
AutoDesk Bentley Systems ESRI gvSIG ओएस पत्रिका
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो Wii, मेरो यात्रा भन्दा राम्रो
अर्को पोस्ट GIS सफ्टवेयर - 1000 शब्दहरूमा वर्णन गरिएकोअर्को »